BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Xukunka Hague ee Charles Taylor
Xukunka Hague ee Charles Taylor
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 26 Abriil, 2012, 08:37 GMT 11:37 SGA
Charles Taylor, Madaxweynihii hore ee Liberia ayaa maanta lagu xukumayaa Hague.
14:00 Maanta Madaxweynihii hore ee waddanka Liberia, Charles Taylor, ayaa maxkamadda caalamiga ee the Hague waxay ku heshay danbi ah inuu gacan siinayay RUF-tii Sierra Leone.
13:59 Dacwad oogaha ugu weyn Hague Brenda Hollis ayaa BBC u sheegay in maanta ay taariikhi u tahay dadka reer Sierra Leone.
13:56 Madaxweynihii hore ee waddanka Liberia, Charles Taylor, ayaa maxkamadda caalamiga ee the Hague waxay ku heshay danbi ah inuu gacan siinayay, isla markaana dhiiri gelinayay jabhaddii Sierra Leone ee (RUF).13:56 Robin waxa uu sheegay in Taylor uu lacag ka heli jiray Madaxweyne Qaddaafigii Libya ee la dilay.
13:54 Waxa uu sheegay in markii uu talada qabtay in dadka Liberia ay rajeynayeen in waa cusub u beryay.
13:53 Robin White oo la kulmay Madaxweynihii hore ee Liberia ayaa sheegaya in Taylor uu ahaa nin aftahan ah, oo aanu hadalka dhibin.
13:50 Cabdi Maxamed waxa uu ku soo qoray BBC Somali Facebook "Madaxda Soomaaliyeed ha ku jiiftaan hana ku soo toosaan arrintan".
13:49 Yaasiin Xirsi oo Soomaaliya jooga waxa uu leeyahay "ha ku quustaan kuwa dhiiga ku daadinaya Soomaaliya".
13:46 waxa uu sheegay in dadka oo Video ka daawanayay laga akhrisan karo wejiyadooda inay ku faraxsan yihiin.
13:44 Weriyaha BBC Mark Doyle, oo jooga magaalada Freetown ayaa sheegaya in markii lagu dhawaaqay xukunka ay dadka neefta ka soo go'day.
13:43 Gacal Yare waxa uu leeyahay "waa in la iska dhaafaa sababtoo ah dad ka danbiyo badan ayaa jooga America iyo caalamka".
13:40 Cali Nuur ayaa BBCSomali Facebook ku soo qoray "waa cadaalad ka bilaabatay Afrika qof walbaana maalin ayaa lala xisaabtami".
13:38 Bogga BBCSomali Facebook waxaa arrintan fikirkooda uga soo dhiibtay ilaa hadda 154 dhageyste.
13:35 Maxkamadda Hague waxa ay danbi ku heshay Charles Taylor inuu gacan siinayay jabhaddii dalka deriska ah ee Sierra Leone.
13:33 Taylor waa hoggaamiyihii ugu heerayay ee dal soo xukuma ee maxkamadda Hague ay danbi ku hesho.
13:30 Qareenka Charles Taylor ayaa sheegay in weligiisba uu ahaa shaqsi aanay saameyn ku yeelan arrinta, maanta uu muujiyay sidaas.
13:26 Caaqil weyn oo jooga Sierra Leone ayaa sheegay in xukunkan oo uu sii xoojinayo xiriirka iyaga iyo Liberia.
13:23 Robin White oo tifaftire ka ahaan jiray Focus on Africa ayaa sheegay in mar walba Taylor uu ku adkeysan jiray in aanu wax danbi ah gelin.
13:22 Madaxweynihii hore ee waddanka Liberia, Charles Taylor, ayaa maxkamadda caalamiga ee the Hague waxay ku heshay danbi ah inuu gacan siinayay, isla markaana dhiiri gelinayay jabhaddii Sierra Leone ee (RUF).
13:20 Ciidamada Britian waxa ay soo fara geliyeen Sierra Leone xilli jabhaddii RUF ay dalka intiisa badan gacanta ku hayeen.
13:19 Weriyaha BBC Mark Doyle waxa uu sheegayaa in jabhadda Sierra Leone ay carruurta ku qasbi jireen dagaalka.
13:16 Charles Taylor waxa ay dacwaddiisa ka furantay Hague June 2007.
13:14 Taylor waxa la filayaa inuu xabsigiisa ku qaato Britain, iyada oo dowladda Netherland ay oggolaatay oo keliya inay marti geliso maxkamadda.
13:08 Waxa uu yiri "cadaaladda maanta looma fulin oo keliya dadka reer Sierra Leone, ee waxa loo fuliyay Afrika oo dhan".
13:08 qof labada gacmood ay uga go'een dagaalka Sierra Leone ayaa BBC u sheegay inuu ku faraxsan yahay xukunka maanta ee maxkamadda.
13:06 BBC Somali waxa ay si toos ah u soo gudbineysaa dhacdada maanta ee maxkamadda Hague.
13:03 Agaasimaha hey'adda Angela Spaid ee Save the Children Sierra Leone, ayaa sheegay in dhacdada maanta ay meel dhigeyso dambiyadii ugu darnaa ee carruurta laga galo wakhtigan casriga ah.
13:00 Madaxweynihii hore ee waddanka Liberia, Charles Taylor, ayaa maxkamadda caalamiga ee the Hague waxay ku heshay danbi ah inuu gacan siinayay, isla markaana dhiiri gelinayay jabhaddii Sierra Leone ee (RUF).
12:58 Magaalada Freetown dadku waxa ay hor dhoobteen oo ay ka daawanayeen go'aanka maxkamada telefishinka.
12:57 BBC waxay si toos ah uga soo warramaysaa telefishin iyo raadiye intuba Galbeedka Afrika iyo goobta maxkamadda ee the Hague.
12:56 Dhageyste jooga Monrovia waxa uu leeyahay Taylor mar hore ayuu dambiile ahaa maxkamadda ka hor, waxaana ku eedeyneynaa reer Galbeedka.
12:54 Cabdi Axmed ayaa isna ku qoray Facebook "Taylor wax walba ayuu istaahilaa ee maxaa Soomaaliya loo dhawranayaa".
12:53 Farxaan Xaashi ayaa BBCSomali Facebook ku qoray "way wanaagsan tahay laakiin maxay maxkamaddani Soomaaliya u soo gaari la'dahay".
12:48 Cheru oo ku aabbe waayay dagaalka Sierra Leone ayaa BBC u sheegay "caddaalad in la fuliyay maanta".
12:46 Kooxda xuquuqda aadanaha u doodda ee Amnesty International ayaa ku tilmaantay xukunka mid farriin muhiim ah u diraya madaxda sare ee dowladdaha.
12:44 50,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalka Sierra Leone intii uu socday, halka kumanyaal kale jirkooda la jarjaray.
12:41 Bogagga bulshada ee internet-ka ayaa waxa meel sare ka maraya mowduuca ku saabsan maxkamadda Hague.
12:39 Dadka jooga magaalada Monrovia oo BBC la hadlaya ayaa sheegay in maanta dareenkoodu kacsan yahay.
12:37 Hassan oo joogaa Monrovia waxa uu sheegayaa inay ku faraxsan yihiin xukunka, oo Charles Taylor uu yahay qabqable dagaal.
12:25 Dhegeystayaal ku sugan Liberia. Juliette waxay BBC u sheegtay in ay ku faraxsan tahay dembiga lagu helay Taylor. Waa in aan ciddii dembi gasha laga harin ayay tiri.
12:25 Waxa xaakimka qaadaya dacwadiisa Richard Lussick uu sheegay in lagu helay 11 dacwad oo uu ku eedeysanaa.waxa ka mid ah inuu hubeeyay RUF oo dhiirigaliyay islamarkaana Foodey sanko oo ku dhintay xabsi ka hor inta aan dacwad lagu qaadin.
12:23 Madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone Charles Taylor ayaa waxa ay maxkmadda Caalamiga ee Danbiyada ku heshay dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo uu geystay intii ay socdeen dagaaladii sokeeya ee dalkaasi (1991 ilaa 2001).
12:09 Dheemmanka Sierre Leone ee ay mucaaradka uu hubeeyay ay u keeni jireen taylor waxaa loo bixiyay dheemmanka dhiigga leh.
12:08 Sababta uu hubka iyo rasaasta u siinayay waxay tahay ayaa la yiri in uu uga beddelanayay dheemman.
12:05 Taylor, ilaa iyo hadda waxaa lagu helay in uu si joogta ah hub iyo rasaas u siin jiray mucaaradka Sierra Leone.
12:04 Ninkii ku dhaliila haween jeceylkiisa, wuxuu isaguna ku eedeyn jiray in uu yahay nin ragga jeclaada asaga oo dhihi jiray. Ugu yaraan anigu haween ayaan jecelahay.
12:03 Markuu xukunka hayay wuxuu dhihi jiray - ka hoggaamiye Afrika ahaan, waxaan xaq u leeyahay afar haween ah in aan guursado.
11:59 Madaxweynihii hore ee Liberia, Charles Taylor, waxaa lagu xukumay in uu yahay dembiile dagaal.
11:58 Charles Taylor waxay Maxkamaddu ku heshay in uu dembiile yahay.
11:57 Waxaa kale oo uu ku faani jiray in uu dhalay carruur badan.
11:57 Wuu ku faani jiray jacaylka uu haweenka u qabo.
11:55 Tusaale ahaan marka la weydiiyo su'aal adag wuxuu dhihi jiray erayo ay ka mid yihiin... Waxaan su'aasha u dhigi lahaa sidan...
11:54 Wuxuu isku dayi jiray in uu wareysi marka laga qaadayo uu isagu maamulo oo weriyaha kala wareego.
11:52 Markii Tifatiruhu u sheegay in lagu eedeynayo in uu dad dil yahay, Taylor wuxuu ku jawaabay in xataa Nebi Ciise markii uu talinayay lagu eedeyn jiray in uu dad dil yahay.
11:52 Dhowr sano ka dib wareysi caan noqday ayaa waxaa ka qaaday tifatirihii Focus on Africa, Robin White.
11:51 Markaas wuxuu ahaa Warlord aan aad loo aqoon.
11;51 Wareysigiisii ugu horreeyay waxaa uu ahaa mid uu ku sheegay in uu la wareegay awoodda dalka liberia.
11:50 Sagaashamaadkii waxaa uu bixiyey wareysiyo farabadan oo telefonka oo uu siiyey BBC laanteeda Focus on Africa ee qaaradda Africa kula hadasha af Ingiriis.
11:49 Waxaa uu ahaa nin jecel inuu is muujiyo, maankana waxaa uu ku hayey oo uu fahamsanaa awoodda qalabka warbaahinta. Waana uu yaqaaney sida loogu dan gaaro.
11:47 Taylor waxaa uu shakhsi ahaan is barbardhigi jirey oo isku mitaali jiray inuu la mid yahay boqor qarnigii 19aad talin jirey oo dadka wanaag badan u sameyn jirey, gaar ahaan kuwa baahida qaba, isagoo og inay u abaal gudi doonaan dadku.
11:47 Mid ka mid ah la taliyeyaashiisu waxa uu sheegey in waxa ku dhacay Charles Taylor laga fursan karey haddii uu dhegeysan lahaa talooyinka ragga la shaqeynayey ee uu la taliyeyaasha u magacaabey.
11:46 Walow uu saraakiil badan u magacaabey inay la taliyeyaal u noqdaan, laakiin awood muuqata kuma ayan lahayn go'aamada muhiimka ah. Wax badanna muusan ka dhegeysan jirin la taliyayaashiisa.
11:44 Tusaale ahaan markii uu soo galay magaalada Monrovia sannadkii 1995 tobanaan kun oo ka soo horjeedey ayaa isugu soo baxay soo dhoweyntiisa, iyagoo qaadaya heeso ay isaga ku amaanayaan.
11:44 Waxaa uu lahaa heybad uu dadka ku soo jiito oo uu dadka ka soo horjeeda inta uu soo jiito ay taageerayaal u noqdaan.
11:43 Ugu dambeyntii waxaa uu aasaasey jabhad uu isagu madax ka yahay oo la yiraahdo the National Patriotic Front of Liberia, taas oo markii dambe xukunka ka tuurtey Samuel Doe.
11:42 Xabsi ayaa la dhigey Mareykanka ku yaala, laakiin waa uu ka baxsadey, qaabka uu u baxsadey ilaa haatanna, su'aalo badan ayaa ka taagan.
11:42 Wuxuu Mareykanka ku laabtay, ka dib markii lagu eedeeyey inuu lunsadey lacag dhan ilaa hal milyan oo dollar.
11:41 Taylor wax yar ka dib waa u ka tegey Liberia, Mareykanka ayuu ku laabtey.
11:40 Ka dib waxaa loo dalacsiiyey inuu noqdo wasiir ku xigeenka ganacsiga ee dowladda Madaxweyne Doe.
11:39 Waxaa shaqo siisay dowladdii uu hoggaaminayey Samuel Doe.
11:39 Siyaasadda waxaa uu bilaabey, isagoo socdaal gaaban ku tegey Liberia, xilli uu ahaa madaxa jaaliyadda Liberia ee ku dhaqan dalka MAreykanka 80aadkii, markaas oo milateriga dalka ay awoodda qabsadeen.
11:38 Charles Taylor waxaa uu madaxweyne ka ahaa Liberia laga bilaabo sannadkii 1997 ilaa markii uu is casiley sannadkii 2003, markii cadaadis kaga yimid beesha caalamka uu horseedey in xukunka ka dego.
11:29 Suldan Musse Ali oo nagula soo xiriiray Twitter waxay isaga ula muuqataa in Taylor lagu heli doono in uu galay dembiyada lagu soo eedeeyay.
11:26 Isagu waxaaba uu ku doodayaa in ay tahay khiyaamo.
11:25 Laakiin dadka qaar ayaa qaba in dacwadda noocan ahi ay tahay mid aan caddaalad keeni karin.
11:24 Xukun adag haddii uu ku dhaco waxaa kale oo rajo laga qabaa in mutaqbalka ay dadku ka baqaan in ay galaan dembi dagaal.
11:24 Dad badan waxay rajo ka qabaan in maanta uu Taylor ku dhaco xukun cabsiin kara cid kasta oo dembi dagaal hore u gashay.
11:17 Dhegeyste Faarax Maxamuud wuxuu leeyahay "Allaah baa caaddil ah laakin wixii dambiile ah waxaa wanaagsan in la mariyo waxay mudan yihiin.
11:15 Dhegeyste FB nagula soo xiriiry: Hodan Xalaawo Cali Chales Taylor, iyo kuwa la nooca ahba hala xukumo waliba xabsida'in ayaa ku fiican, wixii umadda xasuuqa iyo kuwii xoolaha ummadda isku illaawa.
11:13 Dhibbanayaasha iyo kuwa dembiyada geystay labaduba waxay eegayaan go'aankani sida uu u dhaco.
11:13 Sidoo kale, meelo badan oo caalamka ah oo dembiyo dagaal ay ka dheceen amaba ay hdda ka socdaan ayaa u dheg taagaya go'aankan.
11:12 Waxaa kale oo go'aanka aad ugu dheg taagaya dalka Liberia oo ah dalka uu u dhashay Charles Taylor, madaxna uu ka ahaan jiray.
11:11 Xukunka Taylor waxaa aad looga dhowrayaa waddanka Sierra Leone oo ah dalka uu ka galay dembiyada uu ku eedeysan yahay, waa haddii lagu helee.
11:10 Maxkamaddan lagu qaaday Madaxweynihii hore ee Liberia, Charles Taylor, waa mid khaas ah.
11:07 Craxmaan Shaataa: Waa wax loo baahan yahan wana lagu tusaala qaadaa.
11:06 Dhismayaasha kale waxaa loogu talagaley inay noqdaan matxafka nabadda, taallo iyo xarun xusuus dhig ah.
11:05 Dacwadaha dembiyadii Sierra Leone ka dhacay qeybteeda dalka gudihiisa ka dhacaysa oo ay ku kaceyso malaayiin dollar, waxaa kaloo laga dhaxlayaa dhisme weyn oo noqon doona xarunta maxkamadda sare ee dalka
10:03 Dagaalka uu ku eedeysan yahay Taylor waxyaabaha laga dhaxlay waxaa ka mid ah in dadkii lagu waxyeelleeyay dagaalku ay hadda waddoonyinka ka tuugsadaan.
11:00 Zakaria Bariise oo jooga Nairobi "Waa ay wanaagsan tahay in qofkii shacabka dambi ka gala la marsiiyo waajibkiisa, si shacabka ugu qancaan eeyna u dhicin mar labaad. Waa arrin sax ah ayaan leeyahay...mahadsanidiin"
10:57 Dhegeyste FB nagula soo xiriiray: "Magacayaga waa idiris joogo wadanka swedan waxy ilatahayin lajoogo wakhtigi cadalada hogamiye yasha somaliyana kwanso qatan Charles Taylor"
10:56 Hoggaamiyahooda, Chief Sam Hinga Norman, xabsiga ayuu ku dhintey.
10:56 Xukunkaas oo dadka qaar u arko mid khafiif ah waxay ku muteysteen doorkii ay ka cayaareen soo afjaridda dagaalka.
10:55 Laba ka mid ah taliyeyaasha maliishiyadi taabacsaneyd dowladda ee loo yiqiiney Kamajors ayaa iyaguna xabsi ku jira, oo 15 sano ilaa 20 sano oo xarig ah lagu kala xukumey.
10:54 Laakiin saddex nin oo la shaqeynayey ayaa maxkamad la soo taagey dembina lagu heley.
10:53 Waxaa iyana loo badinayaa inuu dhintey hoggaamiyihii hore ee milateriga dalkaasi Johnny Paul Koroma.
10:53 Ninkii ugu qaabilsanaan Sankoh dhinaca dagaalka Sam Bockarie, oo loo yiqiiney Mosquito ama Kaniico ayaa isna xabsiga ku dhintey.
10:52 Hoggaamiyihii falaagada Foday Sankoh waxaa uu ku dhintey xabsiga sannadkii 2003 ka hor intaaney dhamaan dacwadii loo haystey.
10:50 Waxaa kuwaasi ka mid ahaa saddex taliye oo ka tirsanaan jabhaddii RUF ee Sierra Leone ka dagaallameysay. Waxaaba ka mid ahaa hoggaamiyihii KMG ee jabhadda, Issa Sesay.
10:49 Toddobo kale ayaa maxkamad la soo taagey, dembina lagu heley gudaha dalka Sierra Leone.
10:48 Abdullahi Isse isagu wuxuu qabaa "Waa mid lagu tilmani karo caddaalad, balse waxey kasiifiicnaan laheyd hadii kuwo badan oo african carab iyo reer galbeedba sidaan lagu xukumo."
10:45 Waxaa jirey walaac laga qabey in hadii lagu maxkamadeeyo Freetown ay khatar dhinaca nabadgelyada ka dilaacdo gobolka.
10:45 Dhegeyste magaciisa ku tilmaamay Mas'uul Sare isagu wuxuu leeyahay "Wixii cadaalad daro wadoo dhan waxaan qabaa in cadaalada la horkeeno. Somalida why loo arki layahay kuwa cadeesty xa suuqa shacabka somaliyeed?"
10:44 Dhegeyste Muniir Mohamud Siyad waxaan lee yahay, ayuu yiri, waa wax sah ah in la soo taago maxkamad sabasta oo ah hadii la xukmo Taylar hogaamiye kale qalad magalaayo.
10:40 Eedeyn kasta waxaa la sheegayaa falka la geystay iyo goorta iyo goobta uu ka dhacay.
10:39 Sida aad ka daawan karto video-ga bartan ka socda hadda waxaa la akhrinayaa eedeymihii loo soo jeediyay Madaxweynihii hore ee Liberia.
10:38 Goor dhow ayaa xukunkiisa lagu dhawaaqi doonaa.
10:37 "Haddii Eebbe idmo waan soo laaban doonaa" Taylor
10:34 Markii uu Liberia ka baxay Taylor hadalkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa, haddii Eebe idmo
10:33 Mahad Abdi Hassan jooga dalka israel wuxuu qabaa "Waxaan leyahay xukunkiisa saxda ah in lamarsiiyo ayaa lagu qanci karaa"
10:33 Dhegeystayaasha BBC qaarkood ayaa ra'yigooda ka dhiibtay xukunka maanta la ridayo.
10:30 Dad la dilay iyo qaar la kufsaday ayuu ku eedeysan yahay.
10:30 Dheemman iyo lacag intaba in uu dhacay ayuu ku eedeysan yahay Taylor. Inkasta oo uu beeninayo eedeymahaas.
10:29 Waxyaabaha uu ku eedeysan yahay waxaa ka mid ah bililiqo lagula kacay shacab iyo hanti Qaranka Sierra Leone.
10:27 Laakiin markii uu bilo kooban ku sugnaa Sierra Leone sannadkii 2006, waxaa loo duuliyey magaalada The Hague.
10:26 Waxaa markii dambe loo qaadey magaalada Freetown si loogu furo ashtakooyin gaaraya 17 oo dembiyo dagaal ah, kuwaas oo markii dambe lagu soo koobey 11.
10:25 Waxaa la soo qabtay isaga oo u sii baxsan rab dalka Cameroon.
10:24 Taylor aad ayaa looga baqi jiray. Laakiin si lama filaan ah ayaa mar keliya loo waayay oo uu noqday nin baxsad ah.
10:22 Laakiin mar uu kulan la qaatey Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush, Nigeria waxay aqbashey inay gacan geliso Taylor.
10:22 Gudoomiyihi xiligaas ee ururka, oo markaasi ahaa Madaxweynihii Nigeria General Olusegun Obasanjo, waxaa uu balan qaadey inuu nabadgelin doono Taylor.
10:21 Inuu xilka ka dego waxaa door weyn ka cayaarey urur goboleedka iskaashiga Galbeedka Afrika ee ECOWAS.
10:21 Charles Taylor waxaa u xilka madaxtinimada ka degey sannadkii 2003.
10:19 Waa markii ugu horreysay ee Madaxweyne hore la soo taago Maxkamad caalami ah tan iyo dacwaddii Nuremburg dagaalkii labaad ee adduunka ka dib.
10:18 Dacwaddani waxay socotay shan sano ku dhowaad.
10:17 Wuxuu ku tilmaamay eedeymahaasi in loola dan leeyahay hagardaamo siyaasadeed.
10:15 Isagu dembiyaad oo dahn wuu diiddan yahay.
10:13 Waxaa lagu eedeeyay dil, kufsi, xubnaha jirka oo la jarjaray iyo in uu carruur dagaal geliyay.
11:12 waa sannadihii sagaashmaadkii marka uu geystay eedeymaha maanta lagu xukumayo.
10:11 In uu Sierra Leone ka hurinayay dagaal sokeeye muddo toban sano ah ayaa lagu eedeeyay.
10:10 Wuxuu ku eedeysan yahay in dalkiisa ma aha ee waa dalka la deriska ah ee Sierra Leone.
10:03 Waxaa lagu soo eedeeyay dembiyo dhowr ah oo dagaal.
10:01 Charles Taylor wuxuu ahaan jiray Madaxweynihii hore ee Liberia